Ulwazi lwe-Visa yase-UK - Isikole Sezilimi Ephakathi, i-Cambridge
Ngokuya ngobuzwe bakho nokuthi ufisa ukuza e-UK isikhathi esingakanani, udinga ukufaka isicelo se-visa. Ukuhlala izinyanga ezi-6 kuyiVisa Yesivakashi Esijwayelekile, futhi ukuhlala izinyanga eziyi-6-11, iVisa Yesifundo Esifushane. Sicela ubheke lokhu kuwebhusayithi kaHulumeni wase-UK www.gov.uk/apply-uk-visa lapho ungathola khona uma udinga i-visa, futhi ungafaka isicelo online. Siphenye leli sayithi futhi, yize singafaneleki ukunikeza izeluleko ngezomthetho, siyaqonda ukuthi uma ungathanda ukufaka isicelo se-visa kufanele ube nemibhalo efanele okubandakanya:
I-Letter of Acceptance yakho efakazela ukuthi uke wamukelwa yinkambo futhi ukhokhele imali yakho. Le ncwadi izophinde inikeze ulwazi mayelana nenkambo.
Ubufakazi bokukhombisa ukuthi unemali eyanele yokukhokhela ukuhlala kwakho e-UK.
Uma ungaphumeleli ukuthola i-visa sicela usithumelele ikhophi yefomu lokwenqaba i-visa futhi sizohlela ukubuyisela imali ekhokhiwe. Sizobuyisa yonke imali ngaphandle kwenkambo yesonto elilodwa nemali yokuhlala ukukhokhela izindleko zokuphatha.